रामदेवको पतञ्जली विवादमा मुछिए परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ – Health Post Nepal
रामदेवको पतञ्जली विवादमा मुछिए परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ
२०७८ जेठ २६ गते १४:१२
केही दिनअघि पतञ्जली योगपीठले नेपाल सरकारलाई ‘कोरोनिल किट’ दिएको थियो। तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुली महतो महासेठले स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई करिब १ सय कार्टुन औषधी हस्तान्तरण गरेकी थिइन्।
यो औषधी भारतमा समेत प्रतिबन्धित छ र यसैका कारण अहिले रामदेव विवादमा तानिएका छन्।
‘कोरोनानिल किट’ ले कोरोना संक्रमितलाई निको पार्ने भन्दै प्रचार गरिएपछि रामदेव विवादमा तानिएका हुन् र उनले उत्पादन गरेको त्यो औषधी भारतमा प्रतिबन्धित भयो।
जेठ १७ गते काठमाडौंस्थित पतञ्जली पीठले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई त्यो औषधी हस्तान्तरण गर्‍याे।
त्यो औषधी पतञ्जलीले मन्त्री जुली महताे महासेठमार्फत दिएको थियो।
अहिले मन्त्रीद्वय जुली महतो महासेठ र त्रिपाठी दुवै सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन्।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जुलीका श्रीमान रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री बनाइदिए। तर, २०७६ मंसिर ४ गते ओली आफैंले महासेठलाई ‘कारबाही’ गरी यातायात मन्त्रीबाट हटाएका थिए।
पतञ्जलीमा महासेठ दम्पतीकाे कनेक्सन
मंगलबार राति भारतीय टेलिभिजन ‘एनडिटिभी’ ले एउटा समाचार प्रशारण गर्‍याे- ‘पतञ्जलीका व्यापारिक साझेदार रघुवीर महासेठ परराष्ट्रमन्त्री बनेको दुई दिनपछि नेपालको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले रामदेवको ‘कोरोनोल किट’ प्रयोगमा रोक लगाएको छ।’
सँगै उसले अर्को पनि समाचार प्रकाशित गरेको छ नेपाल सरकारले पतञ्जलीको कोरोनिल किटमाथि कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन भनेर।
त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्त्ता कृष्ण पौडेलले भनेका छन्- ‘ती औषधीको प्रयोग नगर्ने भन्नेबारेमा सरकारले कुनै औपचारिक आदेश दिएको छैन।’
हेल्थपाेस्टसँग भने पौडलेले त्यो आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग र स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्णय नै आधिकारिक हुने बताए।
‘त्यो नियमन गर्ने काम उहाँहरूकै हो। यसमा मन्त्रालयले अहिले केही पनि बोलेको छैन,’ पौडेलले भने।
संयोग त्यस्तै पर्‍याे। जेठ १७ गते मन्त्री जुली महतो महासेठले स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई विवादित कोरोनिल किटहरू दिइन्।
२१ गते दुवै मन्त्रीबाट बाहिरिए। त्यही दिन उनका श्रीमान सरकारमा सामेल भएर परराष्ट्रमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री बने। जेठ २५ गते कोरोनिल किट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइयो।
निवर्तमानमन्त्री जुली गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष तथा व्यापारी उपेन्द्र महतोकी बहिनी हुन्। पतञ्जलीका उत्पादन नेपाल भित्र्याउन महतोले सुररुमा लगानी गरेका थिए। तर, दुई वर्षअघि उनी त्यहाँबाट बाहिरिए।
२०७३ सालमा बाराको प्रसौनीमा खुलेको पतञ्जली आयुर्वेदिक उद्योगमा पनि महतोले नै लगानी गरेका थिए। त्यसमा रामदेवले पनि साथ दिए। तर, उद्योगको सेयर बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि रामदेवले लगानीबाट हात झिकेका थिए। रामदेवले आफ्नो ट्रस्टको ९० प्रतिशत सेयर लिने र १० प्रतिशतमात्रै नेपाली व्यवसायीलाई दिने भन्ने अडान राखेका थिए।
उद्योग स्थापना भइसकेपछि विवाद आए पनि महतो एक्लैले त्यो उद्योग चलाइरहेका छन्। सुरुमा पतञ्जलीको ‘ब्रान्ड’ समेत रामदेवले फिर्ता लैजाने भने पनि अहिले उद्योगले त्यही ब्रान्डमा सामान उत्पादन गरिरहेको छ।
यो उद्याोग उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीले गरेकी थिइन्। त्यो कार्यक्रममा योग गुरु रामदेव पनि सहभागी हुन आएका थिए। पछि उनले त्यो उद्योगमा आफ्नो कुनै लगानी नभएकाे विज्ञप्ति निकालेका थिए। त्यसमा उनले व्यवसायी महताे र उनकी श्रीमती समता प्रसादकाे लगानी रहेकाे बताएका थिए।
तर त्यसअघि काठमाडौंमै एउटा पत्रकार सम्मेलनमा भने रामदेवले पतञ्जलीकाे डेढ अर्ब लगानी भइसकेकाे र थप ५ अर्ब लगानी हुने क्रममा रहेकाे बताएका थिए।
उद्योगले अहिले खाद्यान्न र केही सौन्दर्य सामग्री उत्पादन गरिरहेको छ।
तर, पतञ्जलीको व्यापारमा मन्त्री रघुवीर महासेठको कुनै लगानी वा सम्बन्ध नभएको पतञ्जली योगपीठ नेपालका ट्रस्टी शालिग्राम सिंहले बताए।
‘यसमा उहाँको कुनै लगानी वा सम्बन्ध छैन। मन्त्री जुली महताे महासेठसँग हाम्रो सम्बन्धका कारण उहाँ पनि हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको हो,’ उनले भने, ‘पहिला उपेन्द्र महतोजीको केही लगानी थियो। दुई वर्षअघि उहाँ पनि बाहिरिसक्नुभएको छ।’
नेपालमा तीन वर्षदेखि पतञ्जलीका औषधी बेच्न प्रतिबन्ध
नेपालमा तीन वर्षदेखि नै पतञ्जलीका १ सयभन्दा धेरै औषधी बेच्न रोक लगाइएको छ।
पतञ्जलीका झन्डै १ सयथरी आयुर्वेदका औषधीहरू औषधी व्यवस्था विभागमा दार्ता छन् भने विभिन्न खाद्यान्न पनि बजारमा उपलब्ध छन्।
औषधी व्यवस्था विभागले आपूर्ति गरिएका औषधीमा अनिवार्य डब्लुएचओ–जिएमपी (विश्व स्वास्थ्य संगठनको गुणस्तर मापनअनुसार गुड मेनुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस) हुनुपर्ने व्यवस्थापछि पतञ्जलीका सबै औषधी बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको हो।
विभागले गुणस्तरीय औषधी आपूर्तिका लागि जिएमपी तथा सिओपिपि (सर्टिफिकेट अफ फर्मास्युटिकल प्रोडक्ट) अनिवार्य गरेपछि हालसम्म पनि पतञ्जलीले यो पूरा गर्न नसकेपछि, नेपालमा कुनै पनि औषधी बेच्न पाउने छैन।
नेपालमा पतञ्जलीका खाद्यान्नमात्र बेच्न पाइने नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्ययक्ष प्रकाश ज्ञवालीले बताए।
दर्ता भएका ती १ सयथरी औषधीलाई पनि नवीकरणमा रोक लगाइएको छ।
‘तीन वर्षदेखि कुनै पनि औषधी बेच्न रोक लगाइएको छ भने औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्न नपर्ने सामानहरू मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ,’ उनले भने।
यसको नियमन औषधी व्यवस्था विभागले नै गरिरहेको छ। पछिल्लो समय जति पनि औषधी पतञ्जलीको आयात भएक छन्, ती औषधीहरू कुनै पनि दर्ता भएका छैनन्।
कोरोनिल किट प्रयोगमा रोक
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग पतञ्जली योगपीठले सरकारलाई उपलब्ध गराएको ‘कोरोनिल किट’ वितरण केही समयका लागि रोक लगाइएको बताउँछ। औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको पाइएपछि ती किट तत्काल वितरण नगर्ने निर्णय भएको हो।
आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक वाशुदेव उपाध्यायले विभागमा दर्ताको प्रक्रिया पूरा नभएका कारण तत्कालका लागि वितरण गर्न रोक लगाइएको बताए।
पतञ्जलीले उपलब्ध गराएको १ हजार ५ सय किट तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतो महासेठले बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमै बुझेका थिए।
पतञ्जलीले स्वासारी ट्याब्लेट, नाकमा राख्ने अणु तेल र कोरोनिल ट्याब्लेट राखिएको प्याकेट मन्त्रालयलाई दिएको थियो।
मन्त्रालयले कोरोनिल किट प्राप्त गर्नेबित्तिकै आयुर्वेद विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यसको केही दिनमै विभागले छलफल गरेर आयुर्वेद आइसोलेसन सेन्टरहरूमार्फत वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो।
चिकित्सकहरूको निगरानीमा यो औषधी दिने तयारी गरिरहँदा औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता नै नभएको पाइएपछि रोक लगाइएको उपाध्यायले बताए।
‘हामीले पतञ्जलीलाई दर्ता गर्न केही समय दिएका छौं। दार्ता गर्‍याे भने हामी यसलाई वितरण गछौं,’ उपाध्यायले भने।
‘औषधी आयुर्वेदमा उपयोग हुने नै खालको हो। स्वासप्रश्वासका लागि उपयुक्त छ। त्यसैले पनि यसलाई समयमै वितरण गर्न खोजिएको हो,’ उनले थपे।
One thought on “रामदेवको पतञ्जली विवादमा मुछिए परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ”
कति राम्रा र ब्यापारी मन्त्री रहेछन त ! उसै हो त राेटिबेटि कनेक्सन,पत्रुन्जली को बिजिनेस पाटनर भएपछी मुलुक र जनता हेर्ने हो त??